Qarax xooggan ayaa goor dhaweyd ka dhacay Isgooska Ceel-Gaabta ee Magaalada Muqdisho oo ah meel u dhow bar kontarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya, sida ay VOA u xaqiijiyeen ilo ku sugan goobtaas.
Wariyaha VOA ee magaalaa Muqdisho Cabdulqaadir Cabdulle ayaa soo sheegaya in ciidamada ammaanku ay xireen agagaarka goobta uu qaraxu ka dhacay, ayna wadaan baaritaanno la xiriira qaraxyo kale oo laga cabsi qabo.
Wararku waxay intaas ku darayaan inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray dad rayid ah oo ka agdhawaa goobtaa uu ka dhacay qaraxan, waloow aysan hay'adaha ammaanka iyo kuwa caafimaadku weli sheegin tiro la xiriirta waxyeellada qaraxan.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxan.
Wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan.